अयोग्य लडाकूदेखि विश्वविजेतासम्म मिरा राईको संघर्षको कथा | mulkhabar.com
अयोग्य लडाकूदेखि विश्वविजेतासम्म मिरा राईको संघर्षको कथा
January 27, 2018 | 8:51 am 288 Hits
(मिरा राई को संघर्षको कथा साँच्चनै एउटा चलचित्रको कथा भन्दा न्युन छैन । उनले गरेका संघर्ष र प्राप्त सफलताको कथा मूलखबरले यस अघि नै प्रकाशीत गरेको थियो । उनको संघर्षशील जीवनबाट प्रेरणा पैदा होओस भनेर पुन प्रकाशीत गरिएको छ । सं)
जब जिन्दगीमा केही गर्ने उत्साहमाथि बारम्बार नियतिले तुषारापात गर्छ तब मानिस कि विचलित हुन्छ कि त नयाँ संभावनाका लागि आफुलाई अझ संघर्षमा होम्छ । भोजपुरको सानो दुंगला वडा नं ९ मा जन्मीएकी मिरा राईको जीवनमा पनि यस्तै दोबाटो आएको थियो । उनको सपना एक एक गरेर टुक्रन थालेपछि जिन्दगीमा केही गरेर देखाउने अठोट उनले गरेकी थिइन् । मुक्तिको सपना बोकेर घरबाट १२ वर्षिय उमेरमा माओवादी आन्दोलनमा निस्किएकी मिराको सपनामाथि कुठाराघात त्यतिवेला भयो जव आन्दोलनमा हिडेको केही वर्षपछि शान्तिप्रक्रिया शुरु भएपश्चात नेपाली सेना बनेर राष्ट्रको सेवा गर्ने सपना देख्दै थिइन् तब उनलाई अयोग्य भनेर शिविरबाट हटाइयो ।
नेपाली सेना बन्ने सपना टुटेपछि उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जान भिसाका लागि आवेदन गरिन् । उनी र उनको एक जना साथीले संगै फर्म भरेतापनि उनको मात्रै भिसा आएपछि साथीलाई छोडेर एक्लै मलेशिया जान उनलाई मन लागेन । यसरी दोस्रो पटक पनि उनको सपना माथि तुषारापात भएपछि उनी निक्कै विक्षिप्त पनि भइन् तर उनले जिन्दगीको यस लडाईमा हिम्मत हारिनन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै उनका सपनाहरु जति बढारिएपनि उनले अझ अठोटका साथ अघि बढ्ने प्रण गर्दै आफ्नो इच्छा खेलकुद क्षेत्रमा भएकाले गुरु धुव्रविक्रम मल्ललाई भेटेर खेल क्षेत्रमा आफुलाई केही गर्न मन भएको बताइन् । उनको आग्रह पछि मल्लले उनलाई तिन महिनाका लागि रंगशालामा विभिन्न खेलमा टे«निङका लागि भर्ति पनि गराइदिए । एउटी दुर्गम क्षेत्रकी किशोरी जसको भित्रैदेखीको खेलाडी बन्ने उत्कट चाहनाका लागी आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने उनको परिवार थिएन । न त काठमाण्डौमा उनका लागि सहयोगी हात नै थिए । मिराको खेलकुदप्रतिको तिव्र चाहना देखेपछि उनले यो क्षेत्रमा लागेर केही गर्छिन् भन्ने कुरा ठम्याइसकेका गुरु धुव्रविक्रम मल्लले उनलाई आफ्नो छोराछोरी सरह नै एउटै परिवारको सदस्य जस्तै गरेर गाँस र वास दिएर तालिममा सहभागि हुने अवसर जुराइदिए । अरुले डाइट खाएर खेल खेल्थे तर उनले रुखा सुख्खामा नै खेल खेल्थीन् । उनमा खेल क्षेत्रको मोह भने जनमुक्ति सेनाको रुपमा क्याम्पमा रहँदा त्यहाँ रहेको पि.एल.ए. स्पोर्टस क्लवमा नै बसेको थियो । शुरुमा तेक्वान्दो खेलमा दख्खल राखेपनि उनका गुरु मल्लले भने उनमा तिव्र दौडन सक्ने क्षमता देखेपछि उनलाई अल्ट्रा दौडका लागि प्रेरित गरे । अल्ट्रा दौड बारे मिराले सुनेको तिन वर्ष मात्रै भयो तर उनले यति छोटो समयमा अल्ट्रा दौडमा प्राप्त गरेको सफलतालाई हेर्ने हो भने कुनै फिल्मको कथा जस्तै लाग्छ ।
अल्ट्रा खेलमा पहिलो पटक सहभागि हुँदा नै पहिलो बनेर चमत्कारीक छवि बनाउन सफल भएकी मिराका लागि दर्जनौ अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउनु सामान्य जस्तै बनेको छ । जब मिराले अल्ट्रा दौडको बारेमा सुनिन् तब त्यसको लागि अभ्यास गर्न उनी सडकको छेउमा दौडिन्थिन् । उनका एकजना चिनजानका दाजु नेपाली सेनामा कार्यरत थिए । ति पनि अल्ट्रा धावक नै रहेछन् । उनी सडकमा दौडिएको देखेका उनले शिवपुरी संरक्षण क्षेत्र भित्र अभ्यासका लागि स्थान मिलाइदिए । त्यसपछि उनले पनि एक हप्ता दौडने अवसर पाइन् । ती सेनामा कार्यरत दाजुले उनलाई एकदिन फोन गरेर शनिवार विहानै ६ बजेतिर त्यहि स्थानमा आउन भने सोही अनुसार मिरा विहानै पुग्दा त त्यहाँ अल्ट्रा दौडको प्रतिस्पर्धा हँुदै रहेछ । उनलाई पनि प्रतिस्पर्धिको रुपमा सहभागि गराइएको रहेछ । खेलको प्रतिस्पर्धा हुदैछ भन्नेसम्म पनि थाहा नभएकी मिराका लागि यो प्रतिस्पर्धा सरप्राइज नै थियो । आफु भन्दा दिग्गजहरुसँग प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन पाउनु उनको लागि गौरवको कुरा थियो तर पहिलो प्रतिस्पर्धामा नै उनले पहिलो स्थान हासिल गर्लिन भन्ने कुरा न त उनी आफैले सोचेकी थिइन् न त अन्य सहभागिले नै ।
पहिलो प्रतिस्पर्धामा नै पहिलो भएकी मिरालाई सबैले बधाई दिए उनी पनि खुशिले गद्गद् भइन । अन्ततः यो खेल नै उनको जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्न पुग्यो । यो खेलको फोटो बिट्रिस नागरिक रिचार्डले हेरे । त्यति लामो दुरी दौडिएर पनि निक्कै फ्रेस देखिने मिराको इनरजेटिभ पावर देखेर चकित भएका रिचार्ड त्यस खेलका आयोजक मार्फत मिरासम्म आइपुगे । तिनै रिचार्डले उनलाई १७ देशका अल्ट्रा धावकहरु सम्मिलित मुस्ताङमा हुनलागेको प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुने अवसर दिलाए । त्यसमा पनि उनी प्रथम नै भइन् । त्यसपछि उनको यात्रा स्वदेशमा मात्रै सिमित रहेन । विदेशको यात्राका लागि पनि उनैले मिरालाई सपोर्ट गरे । फलस्वरुप उनी पहिलो पटक फ्रान्समा आयोजित खेलमा सहभागि भइन् । त्यहाँ पनि उनले पहिलो स्थान नै हात पारिन् । उनको अद्भुत क्षमता देखेर उनका गुरुहरु नै चकित भएका थिए । त्यसपछि क्रमशः भएका ५÷६ खेलमा उनी प्रथम नै भइन् । वल्र्ड च्याम्पियनहरु सम्मिलित धेरै प्रतिस्पर्धामा प्रथम भएकी मिराले अष्ट्रेलियामा भएको एउटा खेलमा दोस्रो र स्पेनमा भएको अर्को खेलमा तेस्रो बाहेक हरेक प्रतिस्पर्धामा पहिलो सफलता नै हात पारिन् । एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै चामत्कारीक ढंगले अघि बढेकी मिरा अहिले नेसनल जोग्राफिले गरेको विश्वका १० साहसिक खेलाडिको छनौटमा परेकी छिन् । यो छनौटसँगै विश्वको पहिलो साहसिक खेलाडी बन्ने संभावना पनि उनको सामुन्ने छ । यदि उनले पर्याप्त अनलाइन मत पाइन् भने उनी विश्वकै साहसिक खेलाडीको रुपमा उदाउने छिन् ।
२७ वर्षको उमेरमै मिराले गरेको कडा मिहेनत र उनले पाएको ऐतिहासिक सफलता काल्पनिक कथा भन्दा पनि बेजोड छ । परिवर्तनको लक्ष्य लिएर आन्दोलनमा होमीएकी एक किशोरी अन्ततः शान्तिप्रक्रियापश्चात राज्यले अयोग्यको उपमा दियो तर कत्ति पनि विचलित नभई देशको नाम राख्न दृढतापूर्वक अघि बढ्दा सानै उमेरमा उनी विश्व विजेता बन्न सफल भएकी छिन् । उनले विश्वको कुना कुनामा गएर नेपालको झण्डा फहराएकी छिन् ।
देशले त उनलाई के दियो उनलाई थाहा छैन तर उनलाई सबैभन्दा आनन्द देशको झण्डा विश्व सामु फहराउदा नै लाग्ने गर्दछ । यदि उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अन्य देशको नागरिक भएर दौडने हो भने पनि त्यो अबसर उनलाई प्राप्त छ तर उनी कदापी त्यस्तो चाहन्नन् । उनी चाहन्छिन् केबल नेपाली झण्डा फहराउन । उर्जाशिल जोशिली मिरालाई एक तस्विरबाटै पहिचान गरेर अवसर दिलाएका व्रिटिस नागरिकले त उनको क्षमतालाई पहिचान गर्न सफल भए भने विश्व किर्तिमान खडा गर्दै देशको नाम विश्व सामु चिनाउने मिरालाई अझै चिन्न नेपाल सरकारलाई कति समय लाग्ला ?
मिरा भन्छिन् म विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर पनि नेपालको झण्डा फहराउन पाउँदा खुशि हुन्छु । मलाई राज्यले माया दिए पुग्छ । उनीसँग एउटा अनुभब छ , जतिबेला उनले फ्रान्समा भएको अल्ट्रा दौडमा पहिलो हुने अबसर पाइन् त्यहि खेलमा फ्रान्सकै एक खेलाडी तेस्रो भएका थिए । उनलाई त्यहाँका जनता र सरकारले निक्कै सम्मान दियो । त्यो देखेर उनलाई निक्कै खुशि लाग्यो । उनी त्यो सफलतापछि जब नेपाल आइन् उनले राज्य वा कुनै आधिकारिक निकायबाट बधाईका शब्द समेत पाइनन् ।
उनी भन्छिन् राज्यको नाम चिनाउन पाउँदा हामीलाई गौरब लाग्छ । तर राज्यले पनि सान्त्वना दिए अझ उत्साह बढ्ने ठान्छिन् उनी । नेपाल सरकारको तर्फबाट उनले नियमित खालको कुनै सहयोग पाएकी छैनन् । दौडकै समयमा उनको खुट्टामा चोट लाग्यो । लिगामेन्टमा असर परेपछि उनको खुट्टाको अप्रेसन भयो । अप्रेसन हँुदै गर्दा सरकारले ५ लाख दिने निर्णय गरे अनुरुप हालै उनले त्यो रकम भने पाइ्न । त्यो बाहेक सरकारबाट उनले कुनै सहयोग नपाएको मिरा बताउँछिन् । उनले विश्वसामु नाम कमाएकी छिन् । उनलाई खेलका लागि स्वदेश÷विदेश आवत जावतका लागि ट्रायलर नेपालले आर्थिक सहयोग गर्दछ । यसका बाबजुद पनि उनको जीवन यापन भने अझै पनि आर्थिक अभाबमा कठिनाई पूर्वक नै वितिरहेको छ ।
आफुले प्राप्त गरेको सफलतामा राज्यको पनि हिस्सा रहने धारणा राख्दै मिरा भन्छिन् ‘सर्वसाधारण नागरिकहरुको माया र साथले मलाई अझ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ । राज्यले पनि आफ्नो सम्झियोस् भन्ने अपेक्षा छ । म विश्वमा नेपालको झण्डा फहराउन अझ मिहेनत गरेर अघि बढ्नेछु । आफुले पाएको सफलता उनलाई सपना जस्तै लाग्छ । नेपालको डाँडा काँडामा हुर्किएको कारण पनि त्यो रेशमा आफुले सफलता पाउन सकेको उनको ठम्याई छ । देशको नाम अझ उँचो बनाउन सक्दो मेहेनत गर्ने अठोट गर्दै उनी भन्छिन् मलाई जसरी मेरो गुरुहरुले साथ दिनुभयो मैले पनि म भन्दा जुनियर भाइवहिनीहरुलाई ट्रायल रनिंग नेपाल प्रालिको तर्फबाट सहयोग गर्न चाहन्छु र गरिरहेको पनि छु । जीवनका थुप्रै मोडहरुमा निराशा र अपमान सहेर पनि सफलताको शिखर चढेकी मिरा अवसरको खोजीमा रहनुभएका भाइवहिनीहरुलाई साथ दिन पाए आफूलाई खुशी प्राप्त हुने ठान्छिन् ।